Stepper motor isicelo umkhakha
3-isigaba motor umshayeli
IMITHI YOBUSO ELAHLEKILEYO
imaski ukwenza umshini
Umshini wezinto zokwelapha umshini wokushisela umshini wokushisela umshini wokuphrinta we-ceramic umshini wokugaya umshini wokwenza umshini wokufaka uphawu nokusika umshini wokuhweba umshini wokuhweba umshini wokuhweba umshini wokusika inkjet umshini wokuhlela umshini wesithombe umshini wezimpahla imishini ye-LED imishini yokuhlunga umshini we-crystal umshini oqinile we-crystal umshini we-aluminium welding umshini we-SMT imishini yokupakisha emile umshini we-ceramic umshini womdlalo womshini
Ipulatifomu enezinhlangothi ezintathu
I-CNC lathe umshini wokugaya we-CNC umshini wokukhipha umshini womshini wokusika ilangabi Umshini wokutshala iProjektha isici sesibili, insimbi yokulinganisa emithathu yokuxhumanisa
Umshini wokusika we-laser umshini we-laser wokumaka umshini we-laser imagesetter
Imishini yokulungisa izintambo
Umshini wokulebula webhethri weWinder
Umshini wokuhweba umshini wokusika umshini wokuphrinta umshini wokuphrinta umshini
Imishini yejubane eliphansi
Idispenser isetshenziselwa ikakhulukazi ukuhamba kwemikhiqizo ezocutshungulwa ngeplatifomu ye-XY. Lapho ukhipha, ijubane liphansi kakhulu, ngakho-ke le mishini idinga ukudlidliza kwemvamisa ephezulu kakhulu nomsindo wesithuthuthu. Le mishini ngokuvamile isetshenziswa endaweni enokuthula, futhi izidingo zokunemba zokuhambisa ziphakeme kakhulu. Uma kunenkinga yokucubungula ukudlidlizela, umphumela wokucubungula nakanjani uzoba mubi, ngakho-ke isithuthuthu sethu semoto sisetshenziswa kule mishini. Umphumela ungcono.
Imishini efanayo ifaka phakathi: umshini wokusika we-laser, imishini yokuhlola, imishini yokuhlola, umshini we-laser welding, umshini wokumaka i-laser, i-jig.
Ijubane eliphansi kanye nemishini yejubane eliphezulu
Ngaphezu kwemvelo ebushelelezi yemishini yejubane eliphansi, umshini wokuqopha kufanele futhi ufake imishini esheshayo. Kunzima ikakhulukazi uma bobabili isithuthuthu kanye nomshayeli benazo zombili lezi zici. Ama-motor stepper kanye nokushayela kunzima ukufeza. Isibonelo, ukuzinza kwezigaba ezintathu kuzoba ngcono, kepha hhayi ngejubane elikhulu, kunzima ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Amakhasimende amakhulu: Wenzhou Golden Eagle nokunye.
Izidingo ezifanayo zemishini zifaka: umshini we-crystal oqinile, umshini we-aluminium welding, ukuxhumanisa insimbi yokulinganisa, umshini we-tape, umshini wokuhlunga, njll.
Isikhathi Iposi: Apr-28-2019
Ikheli: Cha. 18 Hengshan Road, New District, ChangZHou, Jinagsu, China